२ दिनभित्रमा तपाईको भाग्य चम्किने छ। बेवास्ता नगरी देख्ने बित्तिकै , फोटो छोई ॐ लेखि सेयर गरौं !!! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/२ दिनभित्रमा तपाईको भाग्य चम्किने छ। बेवास्ता नगरी देख्ने बित्तिकै , फोटो छोई ॐ लेखि सेयर गरौं !!!
२ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, फोटो छोई ॐ लेखि सेयर गरौं !!!ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।
७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐ साथै लाइक गर्नु नभुल्नु होला!
दुई मुखे सर्पबाट नसोचेको लाभ,देख्ने बित्तिकै एक पटक पूरा ॐ लेखी सेयर गर्नुहोलादुई मुखे सर्पबाट नसोचेको लाभ,देख्ने बित्तिकै एक पटक पूरा पढि ॐ लेखी सेयर गर्नुस
। विश्वमा विभिन्न किसिमका सर्पहरु पाइन्छ । हामिलाई हाम्रो घर खेत परीपरी पाइने बिभिन्न सपहरु बारे मात्र थाँहा छ ।
यस्तै भारतमा पनि एक अनौठो दुई मुखे सर्प पाइन्छ । भारतको राजस्थानस्थित थार मरभुमीमा दुई मुखे सर्प धेरै नै पाइन्छ ।
कुण्डली,यदि तपाइँले करोडपतिहरुको जन्मकुण्डली देख्नु भएको छ भने उनीहरुको कुण्डलीमा समानता हुन्छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार खास एक योग परेका ब्यक्ति करोडपति हुन्छन् ।करोडपति बन्नका लागि योग मिलेको हनु पर्छ ।
त्यस्ता ब्यक्तिको राजयोग परेको हुन्छ । जुन ब्यक्तिको कुण्डलीमा गुरु धनु वा मीन राशीमा हुन्छ वा कर्कटको स्थानमा पहिलो, चौथो वा सातौं तथा दशौं स्थानमा हुनंछ यस्ता ब्यक्तिको योग दिब्य हुन्छ ।
इस्तो योग मेष, कर्कट वा तुला राशी वा कर्कट तथा तुला र मकर राशी लग्नवालाहरुको कुण्डलीमा हुन्छ । यस्तो योग भएको कुण्डली हुनेहरु चरित्रवान र महान विचारक समेत हुन सक्छन् ।यिनीहरु बुद्धीमान हुन्छन् र दीर्घ जीवन सुखमय पनि हुन्छ ।
त्यस्तै अर्को करोडपति बनाउने योग हो मालब्य योग । यो योगको निर्माण शुक्रले गर्छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कुण्डलीको पहिलो स्थान, चौथो वा सातौं एवं दशौं स्थानमा आफ्नो राशि तुला या वृष रह्यो भने यस्ता ब्यक्ति असाध्यै धनी हुन्छन् ।
यसैगरी हिन्दु धर्मअनुसार, यदि तपाई देवी लक्ष्मीलाई खुशी राख्न र उनलाई आफ्नो घरमा आकर्षित गर्न सक्षम हुनुभयो भने धन र समृद्धिले तपाइलाई कहिले पनि छोड्ने छैन ।
देवी लक्ष्मी धन, भाग्य, प्रेम र सौन्दर्यकी देवीको रुपमा मानिन्छ । उनलाई चंचल स्वभावको पनि मानिन्छ किनकि उनि एकै ठाउँमा स्थायी रुपमा बस्न सक्दिनन् भन्ने विश्वास पनि रहेको छ
***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
अचम्मैका योगी! जसले ४ महिनाकी छोरीसहित अपाङ्ग महिलालाई स्विकारेर बिहे गरे …